Ubuntu အတွက်အကောင်းဆုံး web browser များ Linux မှ
Michael Gaton | | applications များ
Ubuntu တွင်ကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသော ၀ က်ဘ်ဘရောက်ဇာဖြစ်သော Mozilla Firefox အတွက်ရွေးချယ်စရာများကိုသင်ရှာဖွေနေပါကသင်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုစာရင်းကိုတွေ့လိမ့်မည်။ Ubuntu အသုံးပြုသူများအကြားလူကြိုက်အများဆုံး browser များ။ သူတို့ကိုသင်သိချင်ပါသလား။ ကောင်းပြီ၊
1 Mozilla Firefox ကို
2 Google က Chrome ကို
6 ဝဘ်ဘရောက်ဇာများကိုဟက်ကာများရန်မှကာကွယ်နိုင်ရန်နည်းလမ်း (၃) ခု
6.1 VPN ပါ ၀ င်သော browser ကိုသုံးပါ
6.3 သင်အသုံးပြုသော extensions များနှင့် add-ons များကိုရွေးချယ်ပါ
နိဒါန်းမှာပြောခဲ့သလိုပဲ Firefox ပုံမှန်အားဖြင့်လာသည်ဟု web browser ကိုဖြစ်ပါတယ် Ubuntu တွင်၎င်းသည်ယနေ့တည်ရှိနေသောအကောင်းဆုံးဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
၎င်းသည်အလွန်စွယ်စုံသုံးပြီး၊ အမျိုးမျိုးသောအသုံးအဆောင်များနှင့်အတူအဆုံးမဲ့အရေအတွက်များနှင့်တိုးချဲ့မှုများရှိပြီးကိုယ်ပိုင်ဘရောက်ဇာလည်းပါဝင်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်အလွန်တည်ငြိမ်။ မြန်ဆန်သည်။ သံသယမရှိဘဲ၊ ၎င်းသည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်သင်အခြားသူများကိုစမ်းသပ်လိုပါကကျွန်ုပ်တွင်နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာ ၄ ခုရှိသေးသည်ဟုမျှော်လင့်ပါ။ မင်းကိုပြောမယ်!
တင်ဆက်မှုသိပ်မလိုအပ်သည့်ဘရောင်ဇာတစ်ခုရှိပါက၎င်းသည် Google Chrome ဖြစ်သည်။ ဘယ်သူကမသိဘူးလဲ ဟုတ်တယ် ထူးချွန်ဘရောက်ဇာကို Firefox ထက်အားသာချက်တစ်ခုအနေဖြင့်သင်ကြည့်ရှုခြင်းအားလုံးကိုသင်၏ Google အကောင့်နှင့်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်နိုင်သည်။
ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေအတွက်တော့စွယ်စုံသုံးနိုင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူက extensions and utilities တွေထည့်ထားတာကြောင့် browsing လုပ်ရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်အရာရာကိုပိုပြီးလွယ်ကူစေမှာပါ။ လုံခြုံရေးအဆင့်တွင်၊ သင်ထည့်သွင်းပြီးသည်နှင့်သင်၏ဂူဂဲလ်ထဲထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်ဂန္ထဝင် malware blockers များကိုသုံးနိုင်သည်။
ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးတစ်ခု အော်ပရာဖြစ်ပါတယ် အလုံခြုံဆုံး browser များထဲမှတစ်ခု Ubuntu ကိုရှာမယ်။ VPN ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ပါရှိသည် သင်၏အချက်အလက်များကိုလုံခြုံစိတ်ချရသောအချိန်၌အင်တာနက်ကိုလုံခြုံစွာကြည့်ရှုနိုင်သည့်နည်းဖြင့်။ ထို့အပြင်၎င်းတွင်သီးသန့် malware blocker နှင့်အခြားဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် browsing အားပိုမိုမြန်ဆန်စေသည့် ad blocker ပါဝင်သည်။
Brave browser သည်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းကခိုင်မာလာခဲ့ပြီးလျင်မြန်စွာသူ့ဟာသူနေရာချထားခဲ့သောအသစ်အဆန်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် လုံခြုံသောဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာကိုရွေးချယ်ရာတွင်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုများထဲမှတစ်ခု Ubuntu (သို့) အခြား operating system တစ်ခုခုအတွက်ပါ။
ထို့အပြင် Brave သည်ကြော်ငြာကိုပိတ်ဆို့ရန်နှင့်၎င်းကိုရွေးချယ်ရန်နည်းလမ်းဖြင့်အဆိုပြုခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုကြည့်ရှုရန်ရွေးချယ်သူနှင့်သင့်ကိုယ်စားအကြောင်းအရာဖန်တီးသူများအားပေးဆောင်ခြင်းအားဖြင့်စွမ်းဆောင်ချက်အချို့ရှိခြင်းအပြင်ပိုမိုမြန်ဆန်။ ပိုမိုမြန်ဆန်သော browsing အတွေ့အကြုံကိုခွင့်ပြုသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ထူးခြားသောလုံခြုံရေးအဆင့်ကို လုံခြုံပြီးစာဝှက်ထားတဲ့ https connection.
နောက်ဆုံးတော့ Vivaldi သည်ဝဘ်ဘရောက်ဇာတစ်ခုဖြစ်သည် ၎င်းသည် Opera နှင့်တော်တော်ဆင်တူသော်လည်း၎င်းသည် Opera နှင့်အခြားသောအရာများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအင်္ဂါရပ်များကိုနှစ်သက်သည်။ ၎င်း၏ခိုင်ခံ့သောအချက်သည်ခြော။ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်သည် ဒါကြောင့်ဒီဟာကသင်ရှာဖွေနေတဲ့ဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာတစ်ခုလိုတယ်ဆိုလျှင်အမြင့်ဆုံးကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်မယ်ဆိုရင်သင်ရွေးချယ်စရာကတော့ Vivaldi ဖြစ်နိုင်သည်။
သင်၏အတွေ့အကြုံကိုအပြည့်အဝပြုပြင်ပါ။ tab စီမံခန့်ခွဲမှုမှ စ၍ ကီးဘုတ်ဖြတ်လမ်းများ၊ ဘုတ်မှတ်များ၊ အင်တာနက်ကို ၀ င်စဉ်သို့မဟုတ်မျက်နှာပြင်အပြည့်ရိုက်သည့်အခါမှတ်စုများကိုယူနိုင်သည်။
ဝဘ်ဘရောက်ဇာများကိုဟက်ကာများရန်မှကာကွယ်နိုင်ရန်နည်းလမ်း (၃) ခု
စိတ်ပူနေတယ် အင်တာနက်ပေါ်ရှိသင်၏ privacy ၏လုံခြုံရေး? သင်၏အချက်အလက်များလုံခြုံမှုရှိစေရန်ကောင်းမွန်သော browser တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန်မှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ဒါပေမယ့် Don "t ကိုအဲဒီမှာနေဖို့အရာ။ သင်၏ browser ကိုဟက်ကာများ၏ခြိမ်းခြောက်မှုမှသင်လုံခြုံစေလိုလျှင်၊ ၎င်းတို့ကိုရှောင်ရှားရန်အချက်သုံးချက်ကိုဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသည်။
VPN ပါ ၀ င်သော browser ကိုသုံးပါ
လိုမျိုးဘရောင်ဇာကိုသုံးပါ VPN ပါ ၀ င်သော Opera သည်သို့သော်၎င်းသည်သင်ပိုမိုစိတ်ဝင်စားသောအင်္ဂါရပ်များရှိသောကြောင့်အခြား browser တစ်ခုကိုပိုနှစ်သက်လျှင်သင်၏လုံခြုံရေးအားကောင်းစေရန် Linux VPN ကိုသင်အမြဲဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်ပါသည်။
Ubuntu တွင်သုံးမည့် web browser ကိုသင်ရွေးပြီးပြီလား။ အရင်တုန်းကကျွန်တော်ပြခဲ့တဲ့လုံခြုံရေး options တချို့ကိုမင်းစဉ်းစားဖူးသလား။
သင်မှန်မှန်ကြည့်ရှုသည့်စာမျက်နှာများအားလုံးကိုလျင်မြန်စွာ ၀ င်ရောက်ရန် browser များသည်သင်၏စကားဝှက်များကိုသိမ်းဆည်းထားရန်အလွန်အဆင်ပြေသော်လည်းအမှန်တရားမှာ၎င်းပင်ဖြစ်သည် ထိုကဲ့သို့သောအထိခိုက်မခံသောဒေတာများကို web browser များသိမ်းဆည်းထားခြင်းကကျွန်ုပ်တို့အားအားနည်းနေသည် ဟက်ကာများကိုဆန့်ကျင်။ ရရှိသွားတဲ့သူကိုမဆိုဟက်ကာ သင်၏ကွန်ပျူတာကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အလွန်လွယ်ကူလိမ့်မည်မစဉ်းစားဘူးလား
သင်အသုံးပြုသော extensions များနှင့် add-ons များကိုရွေးချယ်ပါ
သင်၏အချက်အလက်များကိုအသုံးပြုခွင့်လျှောက်လွှာနည်းလေလေကောင်းလေလေဖြစ်သည်။ ဒီတော့ add-ons များ install လုပ်သည့်အခါရွေးချယ်ဖြစ်လိမ့်မည် သင်၏ browser ၏မြန်နှုန်းကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည့်အပြင်သင်ထင်မြင်သည်ထက်ခွင့်ပြုချက်များစွာပေးနေခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
သင်မြင်ခဲ့သည့်အတိုင်းရွေးချယ်ရန်အတွက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောရွေးချယ်စရာအနည်းငယ်ရှိပါသည် Ubuntu အတွက်အကောင်းဆုံး web browser များ။ ငါတို့မြင်ပြီ ယနေ့လူကြိုက်အများဆုံး5သင်တို့မူကားမသိကြ။ မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုသင်ရွေးချယ်သည်ဖြစ်စေ၊ အရေးကြီးဆုံးမှာဟက်ကာများကိုဟန့်တားရန်သင်၏ကွန်ပျူတာလုံခြုံမှုကိုအမြဲတမ်းသေချာစေရန်ဖြစ်သည်။ သင်အကြိုက်ဆုံး browser ရှိပါသလား။ ငါ့ကိုသင်၏အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောမှတ်ချက်များချန်ထားပါ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Ubuntu အတွက်အကောင်းဆုံး web browser များ
ဒီနှိုင်းယှဉ်မှုအတွက် Yandex ဟာနေရာတစ်ခုရထိုက်ပါတယ်
Opera နှင့်စပ်လျဉ်း။ သင်က“ ၎င်းသည်ပိတ်ထားသည့်အရင်းအမြစ် browser ဖြစ်သောကြောင့် add-ons သို့မဟုတ် extensions များမလိုအပ်ပါ” ဟုသင်ပြောလိမ့်မည်။ အမှန်တရားမှာ၎င်းသည်၎င်းသည်ပိတ်ထားသောအရင်းအမြစ်နှင့်၎င်းစပ်ကြားဆက်နွယ်မှုကိုသင်လုံးဝနားမလည်ခြင်းဖြစ်သည် ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေမလိုအပ်ပါဘူး ဘာလို့လဲဆိုတော့သူက ad blocker နှင့် malware နှင့်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် VPN တို့ကိုပေါင်းစပ်ထားပြီးဖြစ်သောကြောင့် add-ons များလိုအပ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်ပိတ်ထားသည့်အရင်းအမြစ်၊ Google Chrome သို့မဟုတ် Vivaldi တို့သည်လည်းပိတ်ထားသည့်အရင်းအမြစ်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းကိုဆိုလိုသည်မဟုတ် မဟုတ်ပါသူတို့သည်အင်တာနက်အတွေ့အကြုံကိုတိုးတက်စေရန်အတွက်အချို့သော add-ons များကိုသုံးနိုင်သည် (ကျွန်ုပ်အမြင် uBlock Origin သည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်) ။
စကားဝှက်များကို browser (ဘရောက်ဆာ) တွင်မသိမ်းဆည်းရန်အကြံဥာဏ်နှင့် ပတ်သက်၍၊ ထိုအချိန်က၎င်းသည်လုံခြုံမှုမရှိသော်လည်းလက်ရှိ browser (ဘရောက်ဆာ) အားလုံးက၎င်းတို့အား encrypt လုပ်ထားသည့်နည်းဖြင့် master password ဖြင့်ကာကွယ်နိုင်သည်။ Cloud Password မန်နေဂျာများ သုံး၍ တတိယပါတီဆာဗာများပေါ်တွင်သိမ်းဆည်းထားခြင်းသည်အလွန်လုံခြုံသည် (သို့) လုံခြုံမှုကင်းမဲ့သည်။
ထို့အပြင်အမည်မဖော်သောအခြားရွေးချယ်စရာများအထဲတွင် Chromium ကိုယ်တိုင်စိတ်ထဲပေါ်လာသည်။ ၎င်းတွင်ဂူးဂဲလ်သည် Chrome, Ungoogled-Chromium, SRWare Iron, သို့မဟုတ် Iridium Browser တွင်ထည့်သွင်းသည့်ခြေရာခံလုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးပါဝင်သည်။ Debian အခြေပြုဖြန့်ဝေမှုများအတွက် package (သင် Fedora, OpenSUSE နှင့် Red Hat / CentOS တို့အတွက် package အသစ်များရှိသည်။ )
အိုးနဲ့ကျွန်မ Waterfox အကြောင်းမေ့လျော့!
Jorge Venegas ဟုသူကပြောသည်
ထို့အပြင်စူးစမ်းရှာဖွေသူများစွာမှာပျောက်ဆုံးနေသည်။ falkon, midori နှင့်အခြားသူများ။
Jorge Venegas အားပြန်ပြောပါ
Ubuntu / Mint တွင် Snap မရှိဘဲခရိုမီယမ်:
Brave သည်အမြန်ဆုံးနှင့်အကျိုးရှိစွာအလုပ်လုပ်သည်၊ ကျွန်ုပ်အသုံးပြုဖူးသမျှအကောင်းဆုံး။
Abd hessuk ဟုသူကပြောသည်
အဲဒီမှာ Firefox နဲ့ Chromium နှစ်ခုပဲရှိတယ်။ ကြွင်းသောအရာ Chromium မှဆင်းသက်လာကြသည်။ ဂူဂဲလ်ခရုမ်းကအပို shit တန်ချိန်များစွာကိုသယ်ဆောင်လာပြီးသင်အကြံပြုလိုဆဲဖြစ်သည်။
နောက်တစ်ခုက Ubuntu အတွက်အကြံပေးလိုပါတယ်။ (၆ လကြာပုံရိပ်ပါတဲ့ fuck ဆိုတဲ့ version ကိုမင်းထုတ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာခင်ဗျားပြောခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးဗားရှင်းထက်စာရင်၊ ရယ်မောတာ၊ သူယူလာတာကိုမှတ်ချက်ပေးဖို့) ။ အားလုံး Snap အားဖြင့် manga ကြောင်းတယ်။
Debian မည်သည့်နေရာတွင်မဆို Tuntuntu ဖယ်ရှားသည်
Abd Hessuk သို့ပြန်သွားပါ
Abd သည် Konqueror ဖြစ်ပြီး ၉၆ ခုနှစ်မှစ၍ တီထွင်ခဲ့ပြီး Firefox နှင့်ခရိုမီယမ်တို့နှင့်လုံးဝမသက်ဆိုင်ပါ။ နောက်ပိုင်းတွင် WebKit မှဆင်းသက်လာသောကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ပိုင်အင်ဂျင် KHTML ကိုအသုံးပြုသည်။ Apple က Safari ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။
ငါထင်တာကတော့ Opera ဟာနဂိုကတည်းကသိမ်းဆည်းထားနိုင်တဲ့ option ကိုယူဆောင်လာတဲ့တစ်ခုတည်းသော browser ပါ။ လက်တော့ပ်အတွက်အလွန်အသုံးဝင်သည်။
ငါကတပ်ဆင်ထားပြီနှင့်ဘက်ထရီ FF နှင့်အတူထက်ပိုကြာရှည်ခံ။
debianitafreoz konqueror သည်ဆောင်းပါးတွင်မပါပါ။